Quba Qaadka oo ka qayb qaata dib u dhiska dalka (Qormo xiiso leh+VIDEO) – SBC
Quba Qaadka oo ka qayb qaata dib u dhiska dalka (Qormo xiiso leh+VIDEO)
Posted by editor on Siteenbar 17, 2012 Comments
Walaal kayaga qayiloow dalkii iyo dadkiibaa way kutabayaan,aan idiin waramee dadkii Soomaaliyeed waxaa wajiyadooda kamuuqata hiddidiilo rayn-rayn iyo farxad qofwalbana wuxuu udiyaar garoobayaa sidii uu uga qayb qaadan lahaa isbedalkan taariiqiga ah ee wadankeenii kasocda.
Waxa dalka iyo dadkuba tabayaan doorkii aad kulahaydeen bulshada iyo nolosha dad badan ayaa waxay aamin san yihiin inaan wax is baddala aydnaan samayn Karin , wax horumar ahna aydaan soo wadin bulshada inaad kutihiin boog kutaala oo waligood marfishyada kujiri doona, halka qaarkalana aaminsan yihiin inaad tihiin ragas laharay ummada ma ogtihiin intaad qayilayseen in isbedel badani dhacay , ma lasocataan dowladbaa dhalatoo dhulkii nabad , ma ujeedaan inta asaagiin dhaqaageen oo ay guntiga dhiisha isaga dhigeen ayay waxay doonayaan inay lajaan qaadaan isbedelka cusub oo wadankii kabilaamay.
Qayb kale oo bulshada kamida oo aan anigu kamid ahayna waxaanu aaminsanahay in marfishyada ay kujiraan muruq iyo maskax badan oo tiro iyo tayoba kusoo kordhin karta dalka iyo daddaalka kasocda dalkeenii.aadna tihiin curadyadii dalka, maantana dhulkiinii ayaa idiin baahan oo kutaahaya meeye Curadyadii igu dhashay,
Haddaba waa maxay dareenkuuni ? maxaad kutaahaysaan? maxaad ku hamidaan ? maxaad kutashataan ?
waxaan iddiinku baaqaybnaa walaalahayaa tihiine nasoo raaca boorka iskajafa, oo istaaga, kakaca fadhiga ,Quba aadka oo kaqaybqaata dib udhiska Dalaka.
DAAWO VIDEO KU SAABSAN ARINTAN MUHIIMKA AH EE LA XIRIIRTA QAADKA.